Saka nalaina sarina endrika sary roa ambin'ny folo | Famoronana an-tserasera
Mpanakanto iray manintona ny saka amin'ny endriny roa ambin'ny folo, avy any Disney ka hatrany Tim Burton's
Nandray anjara tamin'ny firaketana maro samihafa avy amin'ny Creativos Online ny saka. toy ny mitranga amin'ny Internet sy ireo GIF ireo sarimiaina izay afaka hitantsika amin'ny Imgur, eto no nahazoantsika ny saka Nora manokana, na ireo ho an'ny Vovon-drano Penovác mahatalanjona fotsiny izy ireo amin'ny sary sy ny sarimiaina. Inona no fomba tsara kokoa noho ny fampiasana ny mascot misy antsika ho loharanom-aingam-panahy na ho maodely ho an'ireo fanoharana ireo.
Toy izany koa no nanjo ny mpanakanto iray izay nanana ny tranga niseho ampiasao ny sakao amin'ny fomba roa ambin'ny folo Izy ireo dia manomboka amin'ny iray izay mitovy amin'ny Garfield, mankany amin'ny an'i Tim Burton na ireo Disney mahazatra toy ny amin'ny sarimihetsika Aristocats manaitaitra be. Ka andao hofantarina ity artista mpanao sary mihetsika ataon'ny mpianatra any Alemana izay fantatra amin'ny hoe Miyuli amin'ny Internet ity.
Julika dia mpianatra sary mihetsika izay namorona andian-dahatsoratra sary mampihomehy be Ampiasainy ny saka mba hijerena ireo fomba fanoharana samihafa hitantsika tamin'ny horonantsary toy ny Aristocat voalaza etsy ambony na ny an'i Tim Burton toy ny Nightmare alohan'ny Krismasy, na dia amin'ity sary ity aza, fa tsy ireo kisarisary tany am-boalohany.
Tsy fantatsika ny anaran'ny saka, fa ny fiovana ao aminy tena mahery fihetsika izy ireo amin'ireo lamaody roa ambin'ny folo samihafa izay tarihin'i Miyuli miaraka amina kalitao teknika lehibe avy aminy, izay tena mahavariana, toa an'i Simon na i Garfield.
Tolo-kevitra kanto iray izay angoninay hanohizana ireo saka izay tianay hitondra betsaka manaraka ireo andalana ireo noho ny toe-tsainy sy ny fihetsika hafahafa izay mazàna mitarika amin'ny sary mahaliana sy manokana.
Afaka manaraka ny mpanakanto avy aminy ianao Facebook, Tumblr e Instagram for fantaro ny momba ireo tolo-kevitra vaovao omenao tao anatin'ireo taona nianarako.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Mpanakanto iray manintona ny saka amin'ny endriny roa ambin'ny folo, avy any Disney ka hatrany Tim Burton's
Toetra fototra 9 izay mamaritra ny maha-izy azy ny sary famantarana
Logos entanin'ny fironana kanto: Art Deco